Izay rehetra mijoro sy vonona ny hilaza ny hosoka sy ny hala-bato nitranga tany amin’ny faritra misy azy dia gadraina avokoa, hany ka voatampim-bava ny rehetra. Ankoatra izay dia totofana fahantrana ny vahoaka, hosihosena ny zony raha mbola hahodinkodina ihany koa ny safidiny. Tsy hita taratra intsony hoy izy ny mahatany tan-dalana an’i Madagasikara, difotra tanteraka ny demokrasia ka ilana fandraisan’andraikitra. Miantso ny CENI sy ny HCC mba handray ny andraikiny feno araka izany ny VOT . Ekena hoy izy fa efa misy ny fampitahana ny PV saingy tokony hatao tsara sy tohizana araka ny tokony ho izy izany. Miantso ny mpitandro ny filaminana koa izy mba hijery ireo tena mpanakorontana ny firenena.